Ugwetshwe iminyaka emibili uNgqongqoshe waseZambia - Bayede News
Ugwetshwe iminyaka emibili uNgqongqoshe waseZambia
Inkantolo yaseZambia ngoLwesihlanu imvalele ejele owayenguNgqongqoshe weKhabhinethi iminyaka emibili ecaleni lenkohlakalo elalishukumise abanye babaxhasi baseNtshonalanga ukuthi babambe usizo lwabo kulesi sizwe esiseningizimu ne-Afrika.
IBritain, iFinland, i-Ireland neSweden zagodla imali ecishe ibe yizigidi ezingama-$34 eyayihlelelwe ukusiza imikhakha yezenhlalakahle kanye nezemfundo yaseZambia ngowezi-2018 ngenxa yokukhathazeka ngokuphathwa kabi kwezezimali.
Ngemuva kokumiswa kosizo lwezimali, uMengameli u-Edgar Lungu uxoshe lowo owayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi Nezenhlalakahle u-Emerine Kabanshi, okuwuye owayephethe izimali.
Leli cala laliyisivivinyo sokuthi uLungu ubhekana kanjani nenkohlakalo kuhulumeni olwa nokukhula kancane komnotho, izikweletu ezinkulu nokuncipha kwemali ebekelwe amazwe angaphandle. Ekhipha lesi sigwebo, uMehluleli uLameck Mwale uthe uKabanshi wahluleka ngamabomu ukulandela imigomo ephathelene nokubandakanyeka kwenkampani kahulumeni, eyabe isabalalisa imali yezenhlalakahle yabampofu.
UMehluleli waphinde wathi uKabanshi waphikelela ekutheni iZambia Postal Services Corp iphinde iqhubeke nokuphatha izikhwama zezenhlalakahle noma ngabe kuyacaca ukuthi labo abahlomulayo abasazitholi izimali. UMehluleli uMwale uthe iZambia Postal Services Corp isebenzise ingxenye yemali ukuthenga izimoto ukuze zisetshenziselwe ukuphatha, okungahambisani nemibandela yenkontileka yayo noHulumeni.
“Kunesidingo sokwenza isibonelo kulabo abazokwenza amacala anje. Ngakho-ke, ngigweba umsolwa izinyanga ezingama-24 ejele kusukela namuhla, ”kusho uMwale ngemuva kokuba uKabanshi enxuse ukuthi bamunciphisele isijeziso sakhe. Umuntu otholwe naleli cala ujwayele ukujeziswa iminyaka eli-14 esejele.
Isimo eTigray sivukuze imithandazo kuPapa uFrancis
AbaseZambia bazovota ngo-zili-12 kuNcwaba okhethweni lobumengameli, lwePhalamende kanye noHulumeni Basemakhaya, impi yokulwa nenkohlakalo kanye nomnotho ihamba phambili phakathi kwezinkinga zomkhankaso.
Bali-16 abantu abazongenela ukhetho lukaMengameli, kanti uLungu kanye nomholi ophikisayo ophambili uHakainde Hichilema, owaphuma isibilo ngowezi-2016, okuyibona ababanga isikhundla kakhulu.
Anathi Mtaka Jun 4, 2021